भेरोसिल खोप बोकेर गोरखाको चुमनुब्री पुगे मुख्यमन्त्री पोखरेल - पावर संदेश
भेरोसिल खोप बोकेर गोरखाको चुमनुब्री पुगे मुख्यमन्त्री पोखरेल
१ श्रावण २०७८, शुक्रबार १५:३० मा प्रकाशित
पर्वत :गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली कोरोना भाइरसविरुद्धको भेरोसिल लिएर गोरखाको विकट क्षेत्रका रूपमा रहेको चुमनुब्री गाउँपालिकामा पुगेका छन् । सडकमार्फत जान समस्या रहेको तथा यसअगाडि पनि हेलिकोप्टरमार्फत नै खोप पठाइएको चुमनुब्रीमा कोभिड–१९ को प्रभाव बढी देखिएको थियो। त्यहाँका नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खोपसहित मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले नै नेतृत्व गरेको टोली चुमनुब्री गएको हो।
मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भरत कोइरालाका अनुसार गाउँपालिकाका लागि चाहिने तीन हजार खोप लिएर टोली त्यसतर्फ लागेको हो। चुमनुब्रीमा तीन हजार पाँच सय खोप चाहिनेमा पाँच सय जनाले यस अघि नै खोप लगाइसकेका छन्।
अहिले चुमनुब्री पठाइएको खोप तीन हजार जनालाई नै उपलब्ध गराइने छ। दोस्रो डोजका लागि फेरि प्रदेश सरकारले खोप पुर्‍याउनेछ। खोपका साथमा मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले मास्क, स्यानिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीसमेत लगेको छ। टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री हरिशरण आचार्य र प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मी पनि छन्।
माउन्टेल चाइल्ड संस्थाको सहयोगमा हेलिकोप्टरमार्फत खोप चुमनुब्री लगिएको हो। हेलिकोप्टरले पालिकाका सात वटै वडाको केन्द्रमा खोप छाड्ने छ। बर्खा याममा बाढी पहिरोले बाटो बिगारेपछि एउटा वडाबाट अर्कोमा जान पनि समस्या रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विनोद विन्दु शर्माले बताए।
प्रदेशका सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो खोप उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धा गरेअनुसार सोही बमोजिम बजेटको प्रबन्ध गरेर तीव्रताका साथ खोप अभियानमा लागेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउँदै आएका छन्। संघ सरकारमार्फत प्राप्त खोप प्रदेशको भण्डारण केन्द्रमा राखेर जिल्लाहरूमा पठाइएको र प्राथमिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिएका छन्।
भण्डारण क्षमता कम भएका कारण प्रदेशबाट तत्काल जिल्लामा पठाउने र त्यसपछि पालिकाहरूमा पठाएर खोप लगाउने गरिएको छ।